Thermoplastic Agba Preheater Manufacturers | China Thermoplastic Agba Preheater Factory & Suppliers
—— Ihe na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie ——
LXD500 Hydraulic Double Cylinder Thermoplastic Preheater (Ichekwa ala）
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke haịdrọlik abụọ sịlịnda thermoplastic preheater. Emere ya maka ebe a na-adọba ụgbọala, obodo, na ụzọ ọzọ dị obere .ọ nwere uru nke ịrụ ọrụ ogologo oge, ịrụ ọrụ dị mfe, na ndozi dị mfe, wdg.
LXD400 Hydraulic Single Cylinder Thermoplastic Preheater
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke haịdrọlik otu-cylinder thermoplastic preheater. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi maka ọrụ akara okporo ụzọ. Multipath mwekota haịdrọlik nnyefe na infinitely agbanwe gbapụrụ ọsọ ọsọ imewe nke nwere ike n'ịwa dị ike torque, iji hụ na igwe nwere ike rụọ ọrụ were were n'okpuru oké ibu.
LXD1200T / 1200B Hydraulic Double Cylinder Thermoplastic Preheater (Mmanụ: Dizel ma ọ bụ LPG)
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke haịdrọlik abụọ sịlịnda thermoplastic preheater. Emelitere ya site naLPGthermoplasticpreheater, nke nwere uru nke ịdị mma, akụ na ụba na ịrụ ọrụ nke ọma. ọkacha mma maka mpaghara nwere oke ifufe.
LXD1200JT / 1200JB -dị nchekwa nchekwa ụdị Hydraulic Double Cylinder Thermoplastic Preheater
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ume-azọpụta ụdị haịdrọlik abụọ sịlịnda thermoplastic preheater. Ọ bụ ọgbọ kachasị ọhụrụ nke preheater thermoplastic, kwadebere ya na nke ọhụrụ-typeattemperator, ngwaọrụ nchekwa na ike na-ere ọkụ nke nwere ike inyere gị aka ịchekwa ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmanụ. Ya mere họrọ ya iji nyere gị aka ị nweta ego karịa.
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke LXD1200 / 800 haịdrọlik abụọ sịlịnda thermoplastic preheater. Multipath mwekota haịdrọlik nnyefe na infinitely agbanwe gbapụrụ ọsọ ọsọ imewe nke nwere ike n'ịwa dị ike torque, iji hụ na igwe nwere ike rụọ ọrụ were were n'okpuru oké ibu.
LXD300 Mechanical Single Cylinder Thermoplastic Paint Preheater
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke n'ibu otu-cylinder thermoplastic agba preheater. Ngwá ọrụ dị ọnụ ala dị ntakịrị na obere, si otú a na-eme ka ọ dị mfe ma dị mfe maka njem. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke obere ihe dịka ebe a na-adọba ụgbọala, ebe obibi, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọdụ ụgbọ mmiri, wdg.
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke n'ibu abụọ sịlịnda thermoplastic agba preheater. A nabatara ya na usoro ịkwọ ụgbọ ala, ikike ọkara nke agbaze agbaze, ma weta ihe na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ nwere uru nke arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ịrụ ọrụ nke ọma, ịrụ ọrụ dị mfe, na ndozi dị mma.